Fanodinkodinana amin'ny haino aman-jery: Ny hosoka tena misy amin'ny Adobe Photoshop | Famoronana an-tserasera
Fran Marin | | sary, maro
Iray amin'ireo toetra faritana lehibe indrindra amin'ny vanim-potoanan'ny fampahalalam-baovao ankehitriny ny fidirana malalaka amin'ny famoahana. Tsy isalasalana fa manome tombony lehibe antsika io. Ankehitriny ny fahalalahana maneho hevitra dia toa zava-misy hita ho olona voavadika. Na izany aza, izany dia mitarika ho feno olona sy azo antoka fihetsika tsy rariny amin'ny besinimaro. Miharihary kokoa izao ny fanaovana hosoka rehefa ity vanim-potoana fidirana malalaka ity dia mifanindran-dàlana amin'ny fanatsarana ny fampiharana fanovana sary sy famerenana sary.
Manolotra anao aho amin'ny manaraka fantina sary môtazy manaparitaka hosoka sy hosoka (amin'ny tranga sasany) amin'ny haino aman-jery lehibe.
Ny angano momba ireo taolana goavambe: Manodidina ny taona 2002, mpanakanto sary iray, IronKite, nampakatra ny montage-tenany manokana tao amin'ny tranonkala Worth 1000 ho an'ny tanjona ara-javakanto. Na izany aza, tsy ho ela dia ho lasa nalaza io firaketana io rehefa navoakan'ny haino aman-jery nomerika fa hita tokoa ny taolam-paty misy refy goavambe. Ity sandoka ity aza dia niseho tamin'ny fizarana isam-bolana an'ny iray amin'ireo haino aman-jery Hindoa manan-danja indrindra: The Voice Voice. Nolazaina aza fa fahitan'ny National Geographic io, izay mandraka androany dia mbola mandray taratasy manontany momba ny raharaha ary mbola mandà ampahibemaso.
Misy antsantsa iray manafika ny ekipan'ny tafika an'habakabaka atsy Afrika? Mampatahotra ny fakana sary raha tena izy, indrindra ho an'ireo izay, toa ahy, manana phobia antsantsa. Saingy, fitaka hafa indray ity. Ny montage dia nitranga tany amin'ny taona 2001 tany ho any mba nanaparitaka volo tamin'ny alàlan'ny mailaka niaraka tamina vaovaom-baovao izay nilaza fa nisy antsantsa iray tokoa nanafika ny ekipan'ny tafika an'habakabaka tsy lavitra an'i Afrika. Vetivety dia ho takatry ny saina indrindra fa fitaka izany, satria eo ivohon'ny sary dia misy ilay vavahady volamena an'ny San Francisco.
Ilay mpizahatany malaza amin'ny tilikambo kambana: Na dia azontsika fantarina tsara aza izany fa fitaka izany, manodidina ny taona 2001 taorian'ny nisehoan'ny fanafihana mahatsiravina ary niaraka tamin'ny fihetsem-po tafahoatra, mihoatra ny iray no nino fa tena misy io sary io. Na izany aza, misy fanontaniana roa izay tsy azo ihodivirana fa manafika antsika rehefa avy nandinika azy io ary nampitandrina antsika ny amin'ny famitahana mahatsiravina izay novolavolain'ilay mpihetsiketsika amin'ny fampiharana Adobe mahafinaritra. Ary, ahoana ny fahitan'ny mpizahatany toy izany ny feon'ny fiaramanidina ao aoriany? Ary ny tsara indrindra… Ahoana no nahatafavoaka an'io fakantsary io taorian'ny fakana sary mahafinaritra toy izany?
Farany nahazo ny saina sy ny laza notadiaviny ilay mahery fo rehetra, niseho tamin'ny haino aman-jery ary lasa viriosy marina tamin'ny alàlan'ny tambajotra. Nisy fiatraikany lehibe tamin'ny fomba maro izany. Ireo izay tratry ny loza lehibe dia nahatsapa ho tafintohina mafy ary naratra, na izany aza, ny vahoaka be vahiny sy tsy miraharaha dia nanova azy ho lasa vazivazy vazivazy mainty tamin'ny fanaovana môtô maromaro an'ilay lehilahy tamin'ny loza isan-karazany teo amin'ny tantara.
Fitsapana balafomanga: Taona 2008. Ny tafika Iraniana ao Tehran dia nanandrana ny balafomanga ary naka sary azy mba hametrahana hafatra mazava. Na izany aza, toa tsy niasa ny iray tamin'izy ireo ary tsy niainga akory. Inona no nataon'izy ireo? Raha ny lojika, mba hanehoana ny fahombiazan'ny fitaovam-piadiany, dia nanapa-kevitra ny hanitsakitsa-bady ilay sary izy ireo tamin'ny fanoloana ilay balafomanga kilemaina tamin'ny iray hafa izay miasa tanteraka. Mampalahelo ho an'ireo mpiambina, efa navoakan'ny gazety Iraniana ny sary miaraka amin'ny balafomanga misy lesoka ary vetivety dia naseho ny hosoka.
Nanavao ny tambajotra sosialy ny saka: Nanjary virus ity sary ity tamin'ny taona 2000, voalaza mihitsy aza fa ny saka izay niandany tamin'ity santionany ity dia nihalehibe teo akaikin'ny laboratoara nokleary Kanadiana. Saingy, ny taona manaraka dia nanaiky ilay mpanoratra ny sary fa nanao montage nomerika an'io izy miaraka amina tanjona tsy manan-tsiny toy ny filalaovana vazivazy amin'ireo namany ary tsy nisy fikasana ny ho lasa lohahevitra resahina manerantany.
Ny sary nanandrana nivarotra anay ny moto: Ho an'ireo olona toa ahy izay mahatsiaro ho manolo-tena amin'ny tontolon'ny biby sy ny fiarovana ny tontolo voajanahary, ity karazana fanodinkodinana ity dia nivadika ho takolaka iray, sahy ary mazava ho azy fanodikodinam-bola ho an'ny tanjona politika sy toekarena. Mampiseho andiam-antilopa mihazakazaka malalaka sy mirindra ny sary raha miampita ny faritra ambonin'izy ireo ny lamasinina. Mahagaga fa nahazo ity loka ity ny sary Lny sary fampahalalana tsy hay hadinoina indrindra tamin'ny taona any Sina mandra-pahatongan'ny fotoana fohy taorian'ny nahitan'ny mpandinika sary sasany ny tsy fitovizan-kevitra ao anatin'io firaketana io, noho izany ny mpaka sary Lilu Weiqiang dia tsy maintsy niaiky fa montage avy amin'ny sary tsy miankina roa. Raha ny lojika, ny fiaran-dalamby sy ireo fotodrafitrasa entiny, dia nisy fiatraikany tamin'ny tontolo iainana sy ny ain'ny biby nonina tao.
Ilay tsunami: Indray mandeha ihany koa, lozam-pifamoivoizana iray manerantany no nampiasaina hamoronana votoaty viralin'ny alàlan'ny fanodinkodinana sary sy ny tambajotra sosialy. Amin'ity tranga ity, ity sary ity dia nalefa betsaka tamin'ny alàlan'ny mailaka manome toky fa nosy any Thailandy izy io talohan'ny nandevenan'ny onja azy. Fotoana fohy taorian'izay dia voamarina fa sandoka indray ary na io aza tsy ny tanàna no tononina, fa tanàna any Chile.
Ny fianakaviana lasa babo: Ity sary ity dia noforonina ho an'ny fifaninanana fanovana sary, na izany aza, nisy olona indray nanararaotra ny fahamarinany ary namorona fampielezan-kevitra amin'ny alàlan'ny mailaka ihany koa, mba hanaitra ny horohoro ary hanome zavatra horesahina. Tao amin'ny mailaka no nilazana fa ny zanak'ilay mpivady dia nalaina tao amin'ilay sary, anisan'izany ny fanambarana diso nataon'ireo voalaza fa ray aman-dreny ireo. Andao, paikady iray mihoatra ny fianarana!
Benito Mussolini dia resin'ny herin'ny fanovana ihany koa: Ny mpitarika fasista italiana no tompon'andraikitra amin'ity montage manaraka ity. Toa nitaingina soavaly izy ary sahy naneho sabatra. Saingy mazava ho azy, ny fisian'io tovovavy mitazona soavaly io dia hampihena ny fahalalahany ka tsy fohy na kamo no nandidy ny hanesorana ilay vehivavy mitazona ny kibony sy mifehy ny soavaly hiala ilay toerana. Mahagaga ve?
Saribakoly sa olona? Vondron'olona mpikomy antsoina hoe Al Mujahedeen no namoaka ity sary ity tamin'ny taona 2005. Nilaza izy ireo fa miaramila amerikana antsoina hoe John Adams izany ary nandrahona ny hanapa-doha azy raha toa ka tsy votsotra ny andiana gadra. Vetivety dia voako tamin'ny gazety izy ireo ary nisy tabataba ampahibemaso, mandra-pahatongan'ny mpanatanteraka iray amin'ny orinasa kilalao nahafantatra ilay voalaza fa nalaina ankeriny. Tsy mihoatra noho ny saribakoly antsoina hoe Command Command Cody manokana io.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » sary » Fanodinkodinana amin'ny haino aman-jery: Ny hosoka tena misy amin'ny Adobe Photoshop